पर्यटन बोर्डको सिइओ बन्ने दौडमा ९ उम्मेदवार, कसले मार्ला बाजी ? - nepalroyalnews.com
पर्यटन बोर्डको सिइओ बन्ने दौडमा ९ उम्मेदवार, कसले मार्ला बाजी ?
५ माघ २०७६, आईतवार ११:२१
बोर्डको सिइओ बन्नका लागि अहिले प्रारम्भिक छनोटमा परेका नौ जनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता भइसकेको छ । शुक्रबारदेखि आजसम्म सबै प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुतिकरण सकिएको छ । प्रतिस्पर्धी सबैको प्रस्तुतिकरण राम्रो रहेको तर तिनैमध्ये उत्कृष्टताका आधारमा तीन जनालाई सिफारिस गरिने छनोट समितिका सदस्य विप्लव पौडेलले जानकारी दिए ।
बोर्डको सिइओको प्रतिस्पर्धाका लागि निवेदन दिएका १७ प्रतियोगीमध्ये उनीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अनुभवका आधारमा ‘सर्टलिष्ट’ गरिएको थियो ।
सर्टलिष्टमा परेका नौ जनालाई विज्ञसहितको सहभागितामा समितिले प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता लिएको थियो । समितिका दुई विज्ञका रूपमा पूर्व पर्यटनसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पर्यटन व्यवसायी सागर पाण्डे थिए । बजारमा हल्ला आएजस्तो सिइओ छनोटमा कुनैपनि किसिमको दबाब र प्रभाव नआएको सदस्य पौडेलले दवी गरे ।
अर्का प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठले सिइओ छनोट प्रक्रियामा आफू परीक्षार्थीका रुपमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेको व्यक्ति भएकाले अहिले केही प्रतिक्रिया नदिने बताए । माघको पहिलो साताभित्रै सिइओको टुङ्गो लाग्ने बोर्डका निमित्त सिइओ नन्दिनी लाहे थापाले बताइन् । बोर्डको सिइओको आकर्षणसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानलाई सफल बनाउनु मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ भने पर्यटन क्षेत्रका चार दर्जनबढी संस्थालाई रिझाउनु र निजी क्षेत्रको साझेदारितालाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउनु पनि गहन जिम्मेवारी हुनेछ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनका गतिविधिसँगै देशभित्र नयाँ गन्तव्य पहिचान तथा प्रवद्र्धन र अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन बजारको खोजी गर्नुपर्नेछ ।
हिमपहिरोमा हराएका पर्यटक भेटिएनन्, कोरियन दूतावासले पठायो हेलिकप्टर